शिक्षा संरक्षण योजना । मेटलाइफ नेपाल
शिक्षा संरक्षण योजना
गृह पृष्ठ परिवार र भविष्य शिक्षा शिक्षा संरक्षण योजना
तपाईंका छोराछोरीको भविष्य र करियर निर्माण गर्ने बलियो जग भनेको शिक्षा संरक्षण योजना हो ।
हामी तपाईंको आवश्यकता बमोजिम उपयुक्त समाधान खोज्न सहयोग गर्न सक्छौं ।
आजको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक युगमा आफ्ना सन्तानलाई उच्च शिक्षा प्रदान गरेर तपाईं उनीहरुको जीवनको राम्रो शुरुवात् गर्न चाहनु हुन्छ । तपाईंका आवश्यकताहरुमा हाम्रो शिक्षा संरक्षण योजना उपयुक्त हुन्छ ।
यस योजनाले तपाईंको बालबच्चाको उमेर अनुसार बीमा योजना छान्न र सोही अनुरुपको अवधि निर्धारण गरी बीमागर्न सक्ने लचकता दिएको छ । तपाईंले बच्चाको उमेरको आधारमा १० देखि २५ वर्षसम्मको कुनै पनि योजना रोज्न सक्नु हुन्छ ।
परिपक्व भएपछिः बच्चा जीवित भएमा बीमालेख परिपक्व भएपछि बीमालेखमा उल्लेखित बीमांकमा बोनस रकम जोडी भुक्तानी गरिनेछ । यसरी प्राप्त रकम बालबच्चाको उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि खर्च गर्न सकिन्छ । यदि तपाईंको छोराछोरीले शिक्षा हासिल गरिसकेका छन् भनें यो रकम उनीहरुले आफ्नो करियर शुरु गर्न वा उनीहरुकै कुनै शुभ कार्य जस्तैः विवाहको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कथंकदाचित संरक्षकको मृत्यु भएमाः
बीमालेख बापत भविश्यमा तिर्न पर्ने सबै बीमाशुल्क माफि हुनेछ र बीमालेख यथावत रुपमा नै चालु रहनेछ । साथै,
शिक्षाका लागि आय स्वरुप बीमांक रकमको एक प्रतिशत बराबरले हुन आउने रकम हरेक महिना बीमालेख परिपक्व नभएसम्म बच्चालाई प्रदान गरिनेछ ।
परिपक्व भएपछि, बीमांक रकमका साथै बोनस रकम पनि भुक्तानी गरिनेछ।
परिपक्व हुनु अगावै बच्चाको मृत्यु भएमाः शिक्षा संरक्षण योजना अनुमोदनपत्र
संरक्षकको अपाङ्गतामा भुक्तानीः थोरै बीमाशुल्क थप गरेर तपाईंले अपाङ्गता संरक्षण पुरक करार जस्तो महत्वपूर्ण लाभ थप गर्न सक्नुहुनेछ। यो पुरक बीमालेख लिएको खण्डमा कारणवश तपाईं विरामी वा दुर्घटनाले गर्दा पूर्ण रुपमा र सदाका लागि अपाङ्ग हुनु भयो भनें भविष्यमा भुक्तानी गर्नु पर्ने सबै बीमाशुल्क माफि हुनेछ । बीमांक रकमको एक प्रतिशत बराबरले हुन आउने रकम हरेक महिना बीमालेख परिपक्व नभएसम्म बच्चालाई प्रदान गरिनेछ । बीमालेख परिपक्व भएपछि, बीमांक रकमका साथै बोनस रकम पनि भुक्तानी गरिनेछ ।
योग्यताः कम्तीमा १ महिनाको (३१ दिन) उमेरदेखि १५ वर्षसम्म, संरक्षकको उमेर २१ देखि ५५ वर्षको हुनु पर्नेछ ।
बीमाड्ढ रकमः कम्तीमा ने.रु. ५०,००० देखि ने.रु. ५०,०००,००० सम्म ।
शर्तः तपाईंले यो योजना कम्तीमा १० वर्ष र बढीमा २५ वर्षसम्मको लिन सक्नु हुन्छ । यद्यपि, योजना अवधि र बच्चाको उमेर २५ वर्षभन्दा बढी हुने छैन ।
भुक्तानी तरिकाः वार्षिक, अर्ध–वार्षिक अथवा त्रैमासिक
पुरक करार बीमालेखको थप सुविधा हो जुन बीमालेखको एक अङ्गको रुपमा रहनेछ । यसले कुनै दुर्घटना भैहालेमा पुरक करारमा उल्लेखित रक्षावरण गरिएका अतिरिक्त लाभहरु प्रदान गर्नेछ । बीमालेखमा समावेश गर्न सकिने केही पुरक करारहरुः
दुर्घटना मृत्यु लाभ(एडिबि)ः यस बापत दुर्घटनाको कारण बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा थप रकम भुक्तानी गरिनेछ ।
अपाङ्गता सुरक्षण पुरक करार(डिपिआर)ः यसले शिक्षा संरक्षण योजनामा लिनेको हकमा भुक्तानीकर्ता विरामी वा दुर्घटनाको कारण अपाङ्ग हुन पुगेमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ । यदि भुक्तानीकर्ता सदाका लागि अपाङ्ग भएमाः
○ भविष्यमा भुक्तानी गर्नु पर्ने बीमाशुल्क माफि दिइनेछ र बीमालेख यथावत् रुपमा नै चालु रहनेछ ।
○ बीमांकको एक प्रतिशत बराबरले हुन आउने रकम हरेक महिना बीमालेख परिपक्व नभएसम्म बच्चालाई प्रदान गरिनेछ र परिपक्व भएपछि, बच्चालाई बीमांक रकमका साथै बोनस रकम पनि चुक्ता गरिनेछ ।
व्यक्तिगत दुर्घटना पुरक करा (पिए)ः ीमितको जीवनमा दुर्घटना भैहालेमा व्यापक रुपमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ । दुर्घटना लाभ अन्तर्गत निम्न विषय पर्दछन्ः
○ दुर्घटनाले हुने मृत्यु(एडि)– कथंकदाचित दुर्घटनाको कारण बीमितको मृत्यु भैहालेमा एकमुष्ठ बीमांक रकम हकवालालाई प्रदान गरिनेछ ।
○ सदाका लागि आँशिक अपाङ्ग(पिपिडि)–कथंकदाचित दुर्घटनाको कारण हेर्ने वा सुन्ने वा बोल्ने शक्ति गुमेमा बीमांक रकमको तोकिएको निश्चित प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम बीमितलाई भुक्तानी गरिनेछ ।
पहिलो पोलिसी शुरु मितिः ०१/०५/२००२